စိတ်ကူးပုံရိပ်: လွယ်လွယ် (ဒုတိယပိုင်း)
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 10:01
I am also waiting for your next post.
သိချင်စိတ်ကို သူမချုပ်တည်းနိုင်ပါ ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံး စာသားလို ဖြစ်နေပါပြီ..:)
မနေနိုင်တော့လို့ မှတ်ချက်ရေးပါသည်... မြန်မြန်ရေးပါဗျို့
မနိ ကိုနိ ရေးနေပါတယ် :)
မချိုသင်း ကိုပီတိ မမီယာ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တော့ စောင့်ပါနော် :D
အားလုံးပဲ ခုလို လာအားပေးတာနဲ့ ရေးချင်စိတ် ပိုပေါက်လာပါတယ်။ အဆုံးသတ်ရင်တော့ အဖျားရှူးမလား စိုးရိမ်မိတယ်။
ပုံရိပ်က စာရေးကောင်းတယ်.. အသေးစိတ်ရေးထားတာ ဖတ်နေရင်းက လွယ်လွယ့် လှုပ်ရှားမှုတွေကို မျက်လုံးထဲပါ မြင်ယောင်လာတယ်..
ပထမပိုင်းဖတ်ပြီးတော့ တိတ်တိတ်လေး နေလိုက်သေးတယ်... ဒုတိယပိုင်းဖတ်ပြီးတော့ ဆက်ဖတ်ချင်လာတယ်.. “ဖတ်ချင်စိတ်ကို ချုပ်တည်းမရတော့ပါ”လို့ ပြောရမလိုပါပဲ... :D
လွယ်လွယ့်ခြေထောက်လေးတွေက်ို သူနဲ့ အတူ တို့ ပါမြင်ချင်လာပြီ…
စာရေးဆရာမလေးရယ် မြန်မြန်ပြပါတော့ဗျို့ ….
မနုစံ မသက်ဝေ မတန်ခူး လာအားပေးတာ ကျေးဇူးနော်။ ဒီရက်ပိုင်း နည်းနည်း အလုပ်များနေလို့ ပိတ်ရက်မှာတော့ တင်ဖြစ်မှာပါ။ စိတ်ထဲမှာ ရှိပေမယ့် ချမရေးဖြစ်သေးလို့။